Budata QuickUp APK maka Android
QuickUp bụ egwuregwu nka nke enwere ike igwu na ekwentị gam akporo na mbadamba.
QuickUp, egwuregwu nka nke Quick Studios mepụtara, bụ egwuregwu mara mma nke ukwuu. Ebumnuche anyị bụ ịkwalite bọọlụ site na ịpị mgbe niile ma na-anakọta diamond na okirikiri. Ma nakụkụ ọ bụla, e nwere ihe mgbochi ndị ga-eme ka ọrụ anyị sie ike. Ihe mgbochi ndị a na-agagharị gburugburu gburugburu na ọnụ ọgụgụ ha na-abawanye na ọkwa ọ bụla. Nihi nke a, ọ nwere ike isiri ike ịgafe ha na ngalaba ndị a.
Iji nweta diamond, ị ga-agafe ihe mgbochi na oge kwesịrị ekwesị. Agbanyeghị, na mgbakwunye na mmegharị ahụ mgbe niile nke ihe mgbochi, bọọlụ anyị na-adakwa. Nihi nke a, ọ dị mkpa idobe bọọlụ notu mpaghara site na ịpị mgbe niile ma lelee ihe mgbochi. Agbanyeghị, mgbe enwere ọtụtụ ihe mgbochi, ọ nwere ike ịpụ naka.
Mmepụta: QuickUp, B.V.